Rebuzz: Maareynta Suuqgeynta Ganacsiga | Martech Zone
Rebuzz: Maareynta Suuqgeynta Ganacsiga
Khamiista, Oktoobar 11, 2007 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Waa oraah qaylo dhaan ah oo dhimatay dhowr sano ka hor laakiin waxay dib u soo ceshaneysaa dardar. Waan ka helay xigashadan qoraaga, Gerry Brown:
Hal shay ayaa iska cad inkasta oo - dadka xayeysiinta iyo suuqgeynta ay fahansan yihiin in webku yahay isha muhiimka u ah macluumaadka suuqyada iyo kanaal awood badan oo isgaarsiineed u leh macaamiisha mustaqbalka. Maaddaama suuqa qaan gaadhayo oo hoggaamiyeyaasha suuqyadu soo baxayaan, waxaa jiri doona dar dar deg deg ah oo qarash gareeya. CRM waxay noqon laheyd wax xoogaa kalsooni daro ah, laakiin xalalka balaaran ee Maareynta Suuqgeynta Shirkadaha ee shabakada ku shaqeysa waxay noqon doontaa meel walba.
Source: Agaasimaha IT
Waxaan hayaa Verizon PPC 6700 oo aan jeclaan lahaa inaan sidan ku sameeyo to